ကောလိပ်မှာရှိတဲ့ ADDERALL ကိုဝယ်ပါ။ ကျောင်းသားမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး သည် SNAPCHAT တွင် ADDERALL နှင့် VYVANSE ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်ကိုရှင်းပြသည် - သတင်း
ကျောင်းသားမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ၏ပြောကြားချက်အရ Snapchat အပေါ် Snapchat တွင် Adderall ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း
နီကိုးလ်သည်ကော်နက်တီကတ်ရှိအထက်တန်းကျောင်းတွင် GPA အဆင့်မြင့်သောနှစ်ဆဖြစ်သည်။ သူမသည်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူဖြစ်သည်။ Adderall နှင့် Vyvanse တို့ကိုပြည့်ကျပ်နေအောင်ရှာဖွေနေသည့်ကျောင်းသားများအားရောင်းချခြင်းဖြင့်သူမသည်တစ်ပတ်လျှင်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ရနိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအကြောင်းလေ့လာလိုသောလူအများအပြားတွင် Adderall ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူလိုသနည်း။ ဒါမှမဟုတ် Adderall ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။ ကောင်းတဲ့ Adderall ဆေးကဘာလဲ။ ဒါမှမဟုတ်တောင်မှ Adderall နှင့် Vyvanse အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ?
ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့နီကိုးလ်ကိုမေးမြန်းပြီး၊ ဘယ်တော့မှမရေတွက်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးဝယ်ယူရေးဆေးတွေဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့နဲ့သူမအရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ Snapchat ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။
ငါမတူညီတဲ့ဆေးပြားတွေအများကြီးရောင်းခဲ့တယ် လူအများစုတောင်းဆိုကြသည့်အရာမှာ Vyvanse ဖြစ်သည်။ လူများအဘို့အသေလိမ့်မယ်။ လူတွေကအဲဒါကိုကျွန်တော့်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက Adderall ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကလူတစ်ယောက်က 'ငါတကယ်လိုအပ်တယ်၊ ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်' လို့ငါ့ကိုစာပို့ခဲ့တယ်။ Adderall အတွက်တော့၊ အဲဒီစာတွေကိုငါမရဘူး၊ ဒါပေမယ့် Vyvanse အတွက်အရမ်းကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားရှိတယ်။
ကျောင်းသားများကိုငါ့ကို Snapchat မေးခိုင်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းပြောခဲ့တာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ Snapchat သည်သင်၏ဖုန်းထဲတွင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာရဲကကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုသိမ်းဆည်းပါက Snapchat သတင်းစကားများကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုသူတို့မမြင်နိုင်ပါ။ သူတို့သည်ကုမ္ပဏီသို့သွားခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များကိုရနိုင်သော်လည်းသင်၏ဖုန်းထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမခံရပါ။ ဒါကငါကလူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပုံကို။
ဒီလူက 'ဟေးငါဒီဗိုင်ဗန်ဆေးပြားတွေအများကြီးဝယ်လို့ရမလား' ဆိုပြီးငါ့ကိုနှစ်ခါရေးခိုင်းတယ်။ တဖန်သင်တို့မပွုနိုငျ! မင်းရူးနေလား? ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုသိမ်းဆည်းလိုက်ပြီဆိုလျှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒါစကားမပြောနိုင်ဘူး 'ဟေးဘာထူးလဲ?' အလုံအလောက်ရှိမယ်၊ ငါတို့ chatting ရလိမ့်မယ်၊ ငါပြောတာ 'ကျေးဇူးပြုပြီး Snapchat ငါ့ကိုစာ' '
ကျွန်တော်တို့ဟာ Snapchat ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်၊ ငါဘာရှိတယ်၊ ဘယ်လောက်လဲ၊ သူတို့ဘယ်တော့ရနိုင်တယ်ဆိုတာငါပြောမယ်။ ငါအဓိကအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သိပြီးသားလူများအား၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုသာရောင်းသည်။
Adderall နှင့် Vyvanse ကိုရောင်းရန်လွယ်ကူပါသလား။
အရမ်းလွယ်တယ် ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ရောင်းလိုက်တာနဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒီငွေပမာဏအတွက်စာသား ၁၀ လုံးဝယ်မယ်။ အစားအသောက်တွေနှင့်ငါ့လျှပ်စစ်ပေးချေမှုအတွက်တစ်လလုံးလုံးငွေပေးဖို့ငါငွေအလုံအလောက်ရခဲ့တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုဆေးပြားတောင်းတာကိုစာပို့ကြတယ်၊ အချိန်နှင့်နေရာတစ်ခုစီစဉ်ပေးတယ်။ တစ်ခါတလေသူတို့ကိုငါမောင်းမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကငါ့ဆီလာတယ်။ လူအတော်များများကကျွန်မကိုစာပို့ကြတယ်၊ ကျွန်တော်တောင်မတုံ့ပြန်ဘူး။ ဆေးခြောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းတာကမင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်၊ လက်မှတ်လည်းရတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆေးတစ်ခွက်တောင်တောင်မှငါ့ကိုထောင်ချနိုင်ပြီ။ လုပ်ဖို့အန္တရာယ်များတယ်
သင်စာသင်နေစဉ်အတွင်းရောင်းအား spikes သတိထားမိပါသလား
မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? စာမေးပွဲများပတ်ပတ်လည်ကြီးမားသောဆူးရှိပါသည်! ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနောက်ဆုံးအပတ်ငါတစ်နေ့အနည်းဆုံးနှစ်ခုမှသုံးကြိမ်ဆေးပြားကိုချွတ်။ ငါတပါတ်အတွက် $ 200 လုပ်လေ၏။ လူများသည်ထိုရက်သတ္တပတ်အတွင်းများစွာသောဝယ်ယူကြလိမ့်မည် - ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ခါ ၀ ယ်လေ့ရှိသည့်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်တစ်ခေါက်တွင် ၁၀ ကောင် ၀ ယ်သည်။
၎င်းကို ၀ ယ်သောအဓိကလူများသည်နောက်ဆုံးမိနစ်ကိုလေ့လာရန်ကြိုးစားနေသူများထက်ကျောင်းများကို ပို၍ ရည်စူးကြသည်။ သူတို့ဟာအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသားလူတွေပါ။ နောက်ဆုံးမိနစ်စာမေးပွဲများတွင်အဆင်ပြေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်အင်ဂျင်နီယာအထူးတွေပါ။
Adderall ကို ၀ ယ်သူများသည် frat bros များဖြစ်လေ့ရှိသည်။ စမတ်အင်ဂျင်နီယာယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများသည် Vyvanse ကိုမကြာခဏ sorority မိန်းကလေးကိုခေါ်။ စာမေးပွဲဖြေရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည် 50/50 ရောနှောခြင်း၊ ကျား၊ မတစ်ခုသည်လေ့လာမှုပြုသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများတွင်သာပါဝင်သည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာယောက်ျားတွေသာဒီကိုယူတဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာက Vyvanse ကိုယူတဲ့လူတွေဟာအလုပ်ကြိုးစားသူတွေဖြစ်ပြီးအနာဂတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ သူတို့ဟာကျောင်းကိုအလွန်အမင်းအပ်နှံထားတယ် - Vyvanse ကလိမ္မာပါးနပ်တဲ့သူတွေကိုကူညီတယ်။ အင်ဂျင်နီယာကဲ့သို့သောအခက်ခဲဆုံးဗိုလ်ကြီးများကိုလုပ်ဆောင်သူများသည် Vyvanse ကိုယူလေ့ရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများသည် Adderall ကိုသုံးကြပြီး၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲစွာလုပ်ကိုင်ရန်မလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ဒီစာသင်နှစ်အထိဒီလောက်မရောင်းခဲ့ပါဘူး။ ငါတရားဝင်ဆေးညွှန်းလိုအပ်တယ် - ငါတကယ်မကောင်းတဲ့ ADHD နဲ့ Executive Function disorder ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်တာဝန် ၂၀ ရှိပါကကျွန်ုပ်သည် Vyvanse သို့မဟုတ် Adderall ကိုမယူလျှင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါလိုလူတွေအတွက်တကယ်ကိုအကူအညီ
ငါကိုယ်တိုင်မကြာခဏသုံးလေ့မရှိသော်လည်းတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်နေသည်ဆိုလျှင်ကျိန်းသေမဟုတ်။ ငါကျန်ဖို့အများကြီးကျန်လိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါငါ့မိတ်ဆွေများကလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကရောင်းစတင်ခဲ့ပြီးအချို့ကအများကြီးရုန်းကန်နေကြသည်။ ငါဘာလို့ဒီလိုမျိုးအသုံးမပြုသင့်သလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါလုပ်တဲ့ပြwithနာတွေကိုလူတွေရုန်းကန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီလိုမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသုံးတာကသူတို့အလွဲသုံးစားမပြုတာဘာကြောင့်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကို၎င်းအားပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရူးမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူဟုယူဆမည့်အစားသူတို့၏ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်မရောင်းပါ။ ဒါပေမယ့်ငါသိတာတော့ထောင်ထဲရောက်အောင်တွန်းပို့နိုင်တဲ့အရာပဲ။
၎င်းသည်ထိုလ၏ဆေးပြားအရွယ်နှင့်ငွေပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ရာပေါင်းများစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်စာသင်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်ဆေးပြားအနည်းငယ်ရောင်းရန်ဒေါ်လာ ၈၀၀ လောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမသိသောအချိန် မှလွဲ၍ သင်ရောင်းမည်မဟုတ်သည့်အကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။
ငါကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုအလွန်အမင်း ၀ င်ရောက်သူမည်သူမဆိုကိုမရောင်းပါဘူး။ ငါသိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုနေ့တိုင်းလိုလိုသုံးနေတယ်။ ဒီကျောင်းမှာအဲဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်၊ ငါသိသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင် Vyvanse ၏ ၁၆၀ မီလီဂရမ်ကိုသာကြာသည် - ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါမှမကြားဖူးသောအရာများဖြစ်သည်။ ငါမီလီဂရမ် ၃၀ ကိုယူတယ်၊ အဲဒါက ၁၀ နာရီလေ့လာမှုကိုပေးတယ်။ ဒါကစွဲစွဲလမ်းသူရဲ့လက္ခဏာပဲ။ သူတို့အတွက်ရောငါ့အတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါဘယ်တော့မှရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါအလေးအနက်ထားမည်သူမဆိုစွဲရချင်ကြဘူး။ ငါအနည်းငယ်ထက်ပိုရောင်းဘူး။
ရယ်စရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် - Vyvanse ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သင်ပထမဆုံးအကြိမ်ယူခြင်းကအလွန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး ၁၄ နာရီမှ ၁၅ နာရီကြာသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်၊ အထူးသဖြင့်သင်ဆေးပမာဏများစွာကိုယူခဲ့ပြီး၎င်းသည်သင်မည်မျှအလေးချိန်သည်နှင့်မည်မျှအရပ်မြင့်သည်အပေါ်မူတည်သည်။ တစ်ခါက Vyvanse ကို sorority မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရောင်းလိုက်တယ်။ သူမသည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကညနေ ၅ နာရီခန့်တွင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးသောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိမအိပ်ခဲ့ပါ။ သူကကျွန်မကိုငိုလို့ခေါ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမအိပ်ဘဲနေခဲ့သည်။ ငါသူမရဲ့အိမ်သို့ရောက်လာ။ , သူနှင့်အတူအဆစ်ဆေးလိပ်သောက်သူမအိပ်ပျော်ခဲ့သည်။ ဒါကဖောက်သည်ကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပါ။
Haha yeah, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ လူတချို့က Adderall ကိုဘယ်လိုယူသင့်သလဲဟုမေးကြသည်။ လူအများစုကသူတို့ Adderall နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမသိကြဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါဖြတ်လျှောက်သွားရမယ်။ နိုးထ၊ မျဉ်းကြောင်းတစ်ချောင်းဖြတ်၊ စာကြည့်တိုက်ကိုသွား၊ နောက်ထပ်ယူမယ်စသဖြင့်။
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် Adderall နှင့် Vyvanse ကိုမယူခဲ့သူမည်သူမဆိုနှင့်ကျွန်ုပ်ရင်းနှီးသည်ဟုမထင်ပါ။ ငါဒီဆေးတွေရောင်းတဲ့လူကိုရှာတွေ့တဲ့အခါရယ်စရာတစ်ခုကတော့မင်းကမင်းဟာအရမ်းအပြစ်ကင်းတယ်လို့ထင်ရလား၊ ငါလမ်းပေါ်တွင်ဘိန်းဖြူဆက်ဆံမဟုတ်ပါဘူး! ငါသည်ငါ့ကျောင်းအလုပ်အတွက်အလွန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါတယ် - ငါတစ်ပါတ်စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ 30 နာရီကြာအောင်ငါ GPA အလွန်မြင့်မားသောငါနှစ်ဆဗိုလ်မှူးပေါ့။ ငါအပိုငွေရှာချင်တယ်။
• 'ငါနာရီနှင့်နာရီကြာသွားနိုင်ပါတယ်တူသောငါခံစားရတယ်': ဒါဟာအမှန်တကယ်လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေး Adderall ယူလိုကဘာလဲ
• Adderall သည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုကဆိုသည်
• Vyvanse ကဘာလဲ? ဒီစာမေးပွဲရာသီမုန်တိုင်းအားဖြင့်ကောလိပ်များကိုယူ Adderall အခြားရွေးချယ်စရာတွေ့ဆုံရန်